काठमाडौँ । सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने भनेकै नागरिकलाई सरल र सहज सेवाका लागि हो । नागरिकको सेवा गरेबापत राज्यले कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएको हुन्छ । तर, सरकारी सेवामा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन लाग्नेलाई नेपाली समाजले पाप गरेको...
विभिन्न गोलीसहित पेस्तोल कलेज परिसरमा !
लोकसंवाद संवाददाता, मंसिर ७, २०७६
प्रहरी कार्यालयमा रहेका मोटरसाइकल व्यवस्थापन गर्नै कठिन !
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा घाँटीमा बिझेको काँडा र ओली सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना भएको १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण सुल्झाउन कठिन भइरहेको छ । १६ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले सफलता पाउन नसक्नुलाई नेपालको प्रहरी...
मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास तोडमोड र परिवर्तन गर्ने ३४५ जनालाई कारवाही
मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास परिवर्तन गरे कारवाही काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास तोडमोड गर्ने या परिवर्तन गरेर राख्ने चालकलाई कारवाही शुरु गरेकाे जनाएकाेछ । लुकिङ ग्लासको जथाभावी प्रयोग गर्ने, हटाउने तथा स्वरूप परिवर्तन गरेका कारण चालकले पछाडिको...
भारतीय नागरिक सत्यनारायण प्रसाद नगद, चेक र भारतीय रुपयाँ सहित पक्राउ
काठमाडौँ । अवैध हुण्डी कारोवार गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको कुलेश्वरबाट भारतीय नागरिकलाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा भारत बेतिया घर भएका सत्यनारायण प्रसाद रहेको महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुँवरले जानकारी दिनुभयो । आरोपीत सत्यनारायण प्रसादको...
जेलर थापालाई एक करोड १३ लाख ६० हजार भ्रष्टाचार गरेको आराेप !
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुरका जेलर चिरञ्जीवी थापाले एक करोड १३ लाख ६० हजार ४१० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले थापाको सेवा प्रवेशदेखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा आर्जन...
धामी कारागारबाट फरार !
मकवानपुर । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदकोसजायमकवानपुरको भीमफेदी कारागार काटी रहेका एक कैदी २०७६ मंसिर १ गते आइतबारफरार भएका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतद्वारा दोषी ठहर गरी जन्म कैदको सजाय दिएकाेमा पाँच वर्षसम्म जेल जीवन बिताइसकेका चितवन घर भएका ३०...
काठमाडौं । विगत एक महिनालाई मसिनोसँग केलाउने हो भने राजनीतिक शक्तिको आड र संरक्षणमा जस्तोसुकै अपराधबाट सजिलैसँग बच्न सकिन्छ भन्ने विगतको परम्परालाई केही हदसम्म चुनौती दिन सफल भएको भान हुन थलोको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्ता कस्ताकस्ता...
विभिन्न ३ आरोपमा आलमसहित १० जनालाई जन्मकैदको मुद्दा दर्ता
सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसहित १० जनालाई जन्मकैदसहित तीनवटा कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटमा सोमवार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आलमसहित १० जनामाथि रौतहट प्रहरीले कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी गरी तीनवटा...
महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश, सांसद पद पनि निलम्बित
काठमाडौं ।जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । दुई दिनसम्मको बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजालासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेष्तेदार...
सांसद राजेन्द्र गौतमको कोठाबाट ३ लाख बराबरको चोरी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद राजेन्द्र गौतमको बानेश्वरस्थित कोठामा चोरी भएको छ । बिहीवार दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला चोरी भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले जनाएको छ । प्रहरीले सांसद गौतम र उहाँको परिवार बाहिर भएका बेला दिउँसो चोरी भएको...
भारतमा बैतडीका तीन नेपाली मजदूरको हत्या, श्रीमतीप्रति आशङ्का
बैतडी । भारतको पिथौरागढमा तीन नेपाली मजदूरको हत्या भएको समाचार छ । उनीहरुको कात्तिक ८ गते हत्या भएपनि आइतबार मात्रै थाहा भएको हो । बैतडीकाे पुरचौंडी नगरपालिका५ दहतालीका ३६ वर्षीय हरे बोहरा र सोही स्थानका २७ वर्षीय बीरा बोहरा तथा...
९२ जनालाई जुवातास खेलीरहेका अवस्थामा गिरफ्तार !
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका- ३ महाराजगंज पिपलमार्ग बस्ने ३० वर्षीय बिक्रम गौतमको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा बिक्रम गौतम समेत २५ जनालाई नगद २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, ३२ थान कौडा, ४ बुक तास र बैंक अफ काठमाडौंको ३ लाख रुपैयाँको...
जापानी प्रहरीले शुक्रबार १८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको चोरी भएको हीराको खोजीलाई तीब्र बनाएको छ । यो हीरा राजधानी टोकियोबाहिर आयोजित गरगहना व्यापार प्रदर्शनीका क्रममा हराएको थियो । टोकियोका प्रहरी प्रवक्ताले प्रदर्शनस्थलबाट चोरी भएको बहुमूल्य हीरा खोज्न प्रहरी परिचालन...
सिरहा । कस्तुरीको बीनासहित सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सीमावर्ती क्षेत्र सिरहाको बरियारपट्टीबाट दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । नेपालबाट भारतर्फ मङ्गलबार साँझ जाँदै गरेको बीआर३२वाई २६९५ नंको स्कुटीलाई शङ्का लागेर जाँच गर्दा कस्तुरीको बीना बरामद भएपछि सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट...
लुटराले वयस्क महिलासँग पैसा नलिइ चुम्बन !
काठमाडौँ, एजेन्सी । ब्राजीलको शहर आमरान्तेमा दुईजना लुटेराले एउटा मेडिकल पसल लुटे । लुटेरा पसलमा पसेर पसलेलाई पेस्तोल तेस्र्याएर त्यहाँ भएको सबै पैसा अर्को लुटेरालाई दिन भनिरहेको थियो । यस दौरान अर्को लुटेरा पसलको काउन्टरबाट पैसा निकाल्न थाल्छ । तब...
दैनिक ३० करोड साइबर अट्याक झेल्दै अलीबाबा !
काठमाडौँ, एजेन्सी । अलीबाबाका फाउन्डर ज्याक मा भन्छन, उनको कम्पनीले दैनिक ३० करोडसाइबर अट्याक झेल्दै आएको छ । यसका बावजूद ग्रुपको भुक्तानी कम्पनी अलीपेलाई ह्याकर्सले कुनै आर्थिक नोक्सान पुर्याउन सकेका छैनन् । अलीपेको करीब एक अरब प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।...
जापानी सम्राट नारुहितोको राज्यभिषेकको अवसरमा साढे ५ लाख अपराधीलाई माफी दिइँदै !
काठमाडौं, एजेन्सी । जापान सरकारले १८ अक्टोबर शुक्रवारका दिन साना अपराधमा दोषी पाइएका ५ लाख ५० हजार अपराधीलाई माफी दिने निर्णय गरेको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार यस्ता अपराधीको सजाय मात्र माफ गरिनेछ जसले जेल सजाय भोगिरहेका छन् र आफ्नो...
काठमाडौंमा अवैध रुपमा पटाका बिक्री गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ ।तिहार नजिकिंदै जाँदा अबैध रुपमा पटकाहरुकाे आयात र विक्री वितरण बढन थालेकाे छ । यसैक्रममाकाठमाडौं महानगरपालिका-३२ टाउन प्लानिङ बस्ने सर्लाही घर भएकी २५ वर्षीया बबिता राउतलाई झिरझिरे पटका ८ प्याकेट, चक्र पटाका १ प्याकेट र खुर्सानी पटाका ६० प्याकेट...